Banyere Burkina Faso Railway | RayHaber | raillynews
HomeỤWAAFRICA226 Burkina FasoBanyere Ọdụ ụgbọ mmiri nke Burkina Faso
Banyere Ọdụ ụgbọ mmiri nke Burkina Faso
24 / 02 / 2020 226 Burkina Faso, AFRICA, ỤWA, ụgbọ okporo ígwè, General, Isi akụkọ
Banyere burkina faso train
Burkina Faso bụ mba na-enweghị ala nke dị na mpaghara ọdịda anyanwụ nke kọntinenti Afrika. Mali, Niger, Benin, Togo, Ghana na Ivory Coast bụ ndị agbata oke ókèala obodo (elekere site na north). Obodo a, nke bụ obodo France n'oge gara aga, nwere nnwere onwe na 1960 n'okpuru aha Upper Volta. N’ihi ọnọdụ ejighị n’aka nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị n’oge nke nnwere onwe, ihe ọgbụgba mere, na 4 Ọgọstụ 1983 n’okpuru ọchịchị Thomas Sankara, a gbanwere aha obodo ya na Burkina Faso n’ihi mgbanwe a. Isi obodo nke obodo a bụ Ouagadougou.
Fasozọ Njikọ Burkina Faso
Onwere uzo uzo ugbo ala nke anakpo Abidjan - Niger Line di na Burkina Faso, bu ndi jikọtara isi obodo Abidjan na isi obodo Ouagadougou. Usoro a, nke nyere mba Burkina Faso nsogbu, nke bụ ala ala n'ihi ụnwụ agha obodo na Ivory Coast, na-arụ ọrụ dị mkpa na mbufe ngwaahịa ahịa obodo a na-ebu n'oké osimiri. Ugbu a, a na-ebugharị ma ebu ndị njem n'ụgbọ a. Na oge Sankara, agbanyeghị na a gbara mbọ dị mkpa iji mee ka ogologo ahịrị ahụ gaa obodo Kaya iji buru akụ na ụba dị n'okpuru ebe a, ejedebe ọrụ ndị a na njedebe nke oge Sankara.
Naanị mmadụ abụọ n'ime ọdụ ụgbọ elu 33 dị na mba ahụ nwere okporo ụzọ okporo ụzọ asphalt. Ọdụ ọdụ ụgbọ elu nke Ouagadougou, nke dị n'isi obodo Ouagadougou, nke bụkwa ọdụ ụgbọ elu kachasị ukwuu na mba ahụ, na ọdụ ụgbọ elu na Bobo-Dioulasso, bụ ọdụ ụgbọ elu abụọ kwekọrọ n'ụkpụrụ mba ụwa.
Obodo a nwere otu ụlọ ọrụ ụgbọ elu mba ahụ aha ya bụ Air Burkina, nke hiwere isi na Ouagadougou. Mgbe e hiwere ụlọ ọrụ ahụ na Machị 17, 1967 n'okpuru aha Air Volta, ọ malitere ịrụ ụgbọ elu ndị ụlọ ọrụ malitere na France, ma aha obodo ahụ bụ nke dị na ntughari Sankara dị na mba ahụ. Dịka otu n'ime ndị sonyere na Burkina Faso, akụkụ nke ụlọ ọrụ Air Burkina bụ nke emere onwe ya na 2002, n'ihi ụgwọ akụ nke Air Afrique, nke ọtụtụ mba Africa na France na-arụ.
Na mgbakwunye na ụgbọ elu ụgbọelu, ndị ụgbọ elu Air Burkina na-ahazi ụgbọ elu ụgbọ elu gaa mba asaa dị iche iche. Mba ndị a na-ebugharị ụgbọ elu mba ụwa bụ: Benin, Ivory Coast, Ghana, Mali, Niger, Senegal na Togo.
Enwere ụzọ 12.506 kilomita n'ofè mba ahụ, nke puku narị abụọ na puku iri na ise na narị abụọ nwere oghere. Na nyocha nke World Bank mere na 2.001, a na-enyocha netwọ ụgbọ njem Burkina Faso dị mma karịa na njikọta ya na obodo mpaghara, Mali, Ivory Coast, GAna, Togo na Niger.
Map Map Burkina Faso
Iwu na Iwu na Liberalization nke Railway Transport ile
Turkey Nkuchi nke Iwu na liberalization nke Railway Transport ...
Ozi na akụkọ ihe mere eme nke Baghdad Railway Line Project
Onye isi Ala DTO Antalya Erol Spoke banyere ụgbọ oloko dị elu na ụgbọ njem ụgbọ okporo ígwè
A ga-enwe nzukọ ọmụmụ ihe na Antalya-Kayseri Railway Project
Ursgbọ oloko dị elu Bursa: Onye bụbu onye CHP Bursa Deputy Kemal Demirel nọ na BURSA TV…
Iwu a gbara na Railway Transport liberalization nke Turkey
President Cankesen Na-ekwu Okwu Banyere Usoro Ịgbahapụ Ụgbọ okporo ígwè (Video)
Banyere Baku-Tbilisi-Kars Railway Line Construction
Erzincan-Trabzon ụgbọ okporo ígwè na-ajụ banyere ọrụ ahụ
Onye isi ulo akwukwo ndi otu a, Elvan Karaman, na ekwu maka uzo oru ugbo
Ndị Minista Ụgbọ njem Kwurịtara na BTK Railway Project
Italian Salini merie Houston Dallas ngwa ngwa Train Tender
Oge Kaadị nke Istanbul na-emechi na ationgbọ njem